Xog Cusub Oo Ka Soo Korodhay Kulankii Maanta Dhex Maray Saraakiisha Barcelona & PSG Iyo Barca Oo Laba Arimood Doonaysa. - Gool24.Net
Xog Cusub Oo Ka Soo Korodhay Kulankii Maanta Dhex Maray Saraakiisha Barcelona & PSG Iyo Barca Oo Laba Arimood Doonaysa.
Barcelona ayaa si dhab ah hogaanka ugu qabtay tartankii ay Real Madrid ugula jirtay saxiixa Neymar Jr waxaana soo baxday xog dheeraad ah oo la xidhiidha kulankii maanta dhex maray saraakiisha kooxaha Barca iyo PSG.
Kadib todobaadyo badan oo warbaahinta caalamku ay hadal haysay suurtogalnimada uu Neymar Jr ka bixi karo kooxdiisa Paris Saint-Germain iyo waliba in uu Barca ku soo laabanayo, waxaa maanta si rasmi ah loo bilaabay wada xaajoodka foolka-ka-foolka ah ee kooxaha PSG iyo Barca.
Barcelona ayaa doonaysa in ay laba arimood samayso si ay ugu guulaysato saxiixa Neymar Jr isla markaana ay meesha ka saarto tartankii xoganaa ee ay Real Madrid dhawaan ku soo gashay arinta Neymar kadib markii ay Pual Pogba ka quusteen.
Ugu horayn wargaysyada Spain ka soo baxa ee Marca iyo Sport ayaa muujiyay in hadda Neymar Jr uu ku dhaw yahay in uu ku soo laabto Barcelona laakiin wali waxaa jira wada xaajood adag iyo waxyaabo gaar ah oo ay PSG dalabtay.
Wargayska Sport ayaa shaaciyay in kooxda PSG ay dalabtay in Barcelona ay soo gudbiso dalab ka kooban Coutinho, Rakitic iyo waliba lacag kaash ah, laakiin waxaa sidoo kale xogtan lagu sheegay in PSG ay dalabtay in Nelson Semedo laga iibiyo.
Barcelona ayaa PSG u sheegtay in Nelson Semedo aanu waqti xaadirkan iib ahayn, laakiin Barca ayaa u furan in Coutinho iyo Rakitic ay qayb ka noqdaan dalabka Neymar iyada oo lagu dari doono lacag lagu sheegay in ay u dhexayn doonto 60-80 milyan yuro.
Xogtan ayaa lagu sheegay in Barcelona ay doonayso sidii ay ula kulmi lahayd Neymar Jr kadib wada hadalkii tooska ahaa ee ay maanta la yeesheen dhigooda PSG, waxa labaad oo ay Barca doonaysaa in Neymar Jr uu saxaafada ka sheego in uu doonayo ku laabashada Camp Nou si uu salaanka uga tuuro Real Madrid.
Laakiin wargayska Marca ayaa isna sheegay in hadda Neymar Jr uu qarka u saaran yahay in uu Barcelona ku soo laabto waxayna sheegeen in madax waynaha Barca ee Josep Maria Bartomeu oo aan kulankii maanta qayb ka ahayn uu khamiista la kulmi doono maamulka kooxda PSG si uu wada xaajoodka qayb uga noqdo.
Agaasimaha ciyaaraha kooxda Barcelona ee Eric Abidal isla markaana ah halyaygii hore ee dalka France ayaa hogaaminaya hawlgalka ay Barca doonayso in ay Madrid ugu garaacdo saxiixa Neymar.
Ma jirto rajo ay PSG ka qabto in Neymar Jr uu kooxdeeda sii joogo, waxayna hadda ogolaatay in ay waada hadal rasmi ah oo waliba toos ah ay la galaan maamulka Barca, taas oo la fahansan yahay in ay soo dadajin karto dhamaystirka heshiiska uu Neymar ugu riyoonayo in uu Barca ku soo laabto.
Haddii ay PSG masuuliyiinta kooxda Barcelona ka ogolaato dalabkooda ah in ay Neymar Jr si shaqsi ah ula kulmaan, waxay taasi abuuri doontaa shaki dhinaca Madrid ay ka qaadi doonto xidiga reer Brazil kaas oo si wayn u doonaya in uu dib u saxo qaladkii uu Barca kaga baxay 2017 kii.
Si kastaba ha ahaatee, waqtiyada soo socda ayaa muhiim u noqon doona kooxda Barcelona iyo Neymar Jr, laakiin hadda wararka oo dhan ayaa muujinaya in Barca ay qaaday dariiqii ay ku heli lahayd Neymar.